मुख्य पृष्ठराजनीतिप्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : ‘आरोप पुष्टि गर्नुहोस्, कि त एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस्’
विराटनगर, १३ मंसिर । नेकपा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेस गरेको प्रस्तावको प्रतिउत्तर फर्काउँदै अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् ।
फौजदारी अभियोग आर्कषित हुने आरोप आफू माथि लागेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका हुन । उनले आरोप प्रमाणित गर्न नसके आफ्नै सहयोद्धा माथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भंग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुन भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले पेस गरेको ३८ पृष्टलामो जवाफी प्रतिवेदनमा भनिएको छ ‘तपार्इँलाई मेरो चुनौती छ– कि आरोप पुष्टि गर्नुस् र राज्यको कानुन तथा पार्टी विधान अनुसार मलाई कार्बाही गर्नुस्, कि त आफ्नै सहयोद्धामाथि निराधार आरोप लगाएर पार्टी एकता भब्ग गर्ने धृष्टताको जवाफदेही बन्न तयार हुनुहोस् ।’
कात्तिक २८ को सचिवालय बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १९ पृष्ठ लामो राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गरेका थिए । प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनको जवाफमा ओलीले ३८ पेज लामो प्रतिवेदन पेस गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा उनले प्रचण्डको प्रस्तावलाई खारेज गर्न आग्रह गरेका छन् । ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन ‘तपाईंले बारम्बार मबाट त्यागको माग गर्नुभएको छ। मैले स्थायी कमिटीको बैठकमा औपचारिक रूपमै आगामी महाधिवेशनबाट अध्यक्षको जिम्मेवारीमा नरहने र आगामी निर्वाचन पश्चात् प्रधानमन्त्री नबन्ने जानकारी गराइसकेको छु। यो भन्दा बढी मैले के त्याग गर्नु पर्ने हो ? तर मेरो मनमा एउटा गम्भीर प्रश्न छ– चार महिनापछि हुने महाधिवेशनबाट सहज नेतृत्व हस्तान्तरण र चयनको बाटो छाडेर हरबखत नेतृत्व परिवर्तनको चलखेल किन ? के कमरेडहरूलाई महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधिहरूको विवेकमाथि विश्वास छैन ? ’
प्रतिवेदनमा उनले प्रचण्डलाई अपादर्शी र छल गर्ने व्यक्ति भनेर आरोप लगाएका छन् । प्रचण्डले आफूलाई पायक पर्नेबित्तिकै अल्पमत र बहुमत कुरा गर्ने गरेको समेत ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।